कर्मचारी निजीसँग सम्बन्ध सुधार्ने ध्यानमा, असर अभिभावकलाई | EduKhabar
- केशब पुरी, अध्यक्ष अभिभावक संघ नेपाल
अभिभावक संधको स्थापना कालदेखि नै आवद्ध भएर शैक्षिक क्षेत्रका विभिन्न अनुभव बटुल्दै आएका पुरी अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष हुन् । संघको केन्द्रीय सदस्य, सचिव, महासचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका पुरीसँग शिक्षा क्षेत्रका सम्बन्धमा हरिसुन्दर छुकांले गरेको कुराकानी :
- शिक्षाको अहिलेको अवस्थालाई कुन रुपमा केलाउनुभएको छ ?
नेपाल सरकारकै कमजोरीको कारणले प्राइभेट स्कुलले प्रश्रय पाएको छ । सरकारसँग आफ्नो मातहतमा रहेको स्कुललाई अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, स्कुलको पठनपाठनबारेमा चासो दिने खालको निकाय छ तर व्यवहारमा भने छैन बराबरको स्थिति छ । त्यतिमात्र नभएर सरकारी निकायका पदाधिकारीहरु कुन चाहिँ प्राइभेट स्कुलमा के हुन्छ ? कसो हुन्छ ? र कुनचाहिँ स्कुलसँग नयाँ आएको अधिकारीले सम्बन्ध राम्रो बनाउने, त्यहाँबाट कस्तो फाइदा लिन सकिन्छ ? यो चिजहरुमा लागेका छन् । यसको असर आम अभिभावकलाई परेको छ ।
- कर्मचारीको भन्दा पनि अभिभावकको आर्कषण पो बढेको देखिन्छ त निजी विद्यालयतिर हैन र ?
सरकारी स्कुलमा पढाउँ, स्तरीय शिक्षा पाउँदैन, बोर्डिङमा पढाउँ, पैसा बढी पर्छ, तर पनि अभिभावक बाध्य भएर र आफूले खाने गाँस कटाएर पनि छोराछोरीको पढाइका लागि निजि विद्यालय पढाउने चलन बढेको हो । त्यसरी प्राइभेट स्कुलमा विद्यार्थी बढेका हुन् । सरकारी स्कुलप्रति अभिभावकको विश्वासै छैन, त्यहाँ राम्रो पढाइ हुन्न भनेर अभिभावकहरु प्राइभेट स्कुलमा आफ्ना बालबच्चाहरु राख्न बाध्य भएका छन् ।
- त्यो बाध्यताको फाइदा कसलाई भो त ?
पक्कै पनि त्यसको फाइदा प्राइभेट स्कुललाई भएकोे छ । स्कुलले मनग्ये शुल्क लिएको अवस्था छ । यो कारणले गर्दा आम अभिभावकहरु भर्नाको नाममा बढी शुल्कको मारमा पर्ने गरेका छन् । अभिभावकहरु रि एड्मिसनको मारमा परेका छन् । शुल्कको विषयमा बढी कुरा उठ्यो भने शुल्कलाई एक ठाउँमा राखेर त्यसलाई एक ठाउँमा राखेर अन्य शिर्षकबाट पैसा लिने प्रवृत्ति बढेको छ । प्राइभेट स्कुलले आम उपभोक्तालाई यसरी पीडित बनाउने काम गरिरहेको छ । प्राइभेट स्कुलले कहिले स्तरीय शिक्षाको नाममा, कहिले लगाउने लुगाको नाममा भरमग्दूर फाइदा लिइरहेका छन् । कहिले के, कहिले के शिर्षकमा पैसा उठाइएको छ ।
- यसरी पैसा उठाउँदा पनि अभिभावक चुप छन् नि त ?
यो विषयमा कुरा उठाउँदा विद्यालय सञ्चालक र प्रिन्सिपलले तपाइँका आफ्ना सन्तनालाई यहाँबाट लान सक्नुहुन्छ, तपाँइको यो ठाउँमा पढाउन सक्ने हैसियत छैन भने किन गर्नुभो भर्ना भन्ने र विद्यार्थीलाई टर्चर दिने अवस्था छ ।
- यो अवस्थामा अभिभावक संघले के गरिरहेको छ त ?
हामी त एउटा सामाजिक संस्था न हो । यो भए गरेका कुरालाई आम जनता र अभिभावकसमझ पुर्याउने हो, यो चिज खराबी हुँदैछ, यो चिजमा सचेत रहनुपर्यो भनेर हामी आवाज उठाइरहेका छौं । राज्यले शिक्षालाई समानुपातिक तरिकाले लान नसकेको विषय र हाम्रा बालबालिकाहरु पीडित रहेको विषयका बारेमा हामीले आवाज उठाइरहेका छौं ।
- तपाइँहरुको आवाजलाई कसरी लिने गरेको पाउनुभएको छ ?
हामीलाई सरकारी निकायले विरोधी ठान्छन् । हामीले सरकारको पक्षमा पनि कुरा गरिरहेका छौं तर सरकारी निकायहरु हामीविरुद्ध खनिनुहुन्छ । तपाइँहरुले यो इश्यु उठाइदिनुभो, तपाइँहरुले यसरी कुरा उठाइदिनुभएन भनेर भन्नुहुन्छ । यसको मतलब सरकार आफै उदासीन छ, लाचार छ । सरकारी शिक्षा र प्रणालीमा कोहीको विश्वास छैन ।
- अब के गर्नुपर्ला त ?
हाम्रो जस्तो देशले सोच्नुपर्ने कुरा, हाम्रा बच्चालाई कस्तो बनाउने ? भन्ने हो । के हाम्रा बच्चाहरुलाई सँधै खाडी मुलुकमा मात्र जाने शिक्षा दिने हो ? हाम्रा विद्यार्थीले खै नैतिक शिक्षाका पाठ पढाएको ? खोई व्यवहारिक पठन पाठन हाम्रो पाठ्यक्रममा ? खोई, सामाजिक शिक्षा ? खोई, प्राविधिक शिक्षा ? यो विषयमा नेपाल सरकारको ध्यान खोई ? यो विषयमा सरकारको कुनै पनि निकायले काम गरिरहेको छैन ।
- सरकारले के गर्नुपर्छ ?
हाम्रो देशको भोलिका कर्णाधारहरुलाई परीक्षणको रुपमा मात्र पढाउने ? तीन वर्ष एउटै विषय एउटै शिर्षकमा त पढाइ हुँदैन भने कस्तो किसिमको जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छौं ? खोई सरकारको यसमा सोच ? हाम्रो देशको आवश्यकता के हो ? हाम्रो देशले कस्तो खालको शिक्षा चाहिरहेको छ ? खोई सरकारको दृष्टिकोण ? त्यसकारण हाम्रा नीतिगत हिसाबले सच्याउनुपर्ने पाटाहरु एक ठाउँमा होलान्, तर आवश्यकताहरु पहिल्याउन जरुरी छ । शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो खेलवाड छ, भने अन्य क्षेत्रमा के अपेक्षा गर्न सक्छौं ?
यसो हुनुमा पाठ्यक्रम पनि दोषी भन्नु भएको ?
विदेशको कुरा जान्नु खराब होइन । थाहा पाउनुपर्छ । तर, हाम्रो देशको भूबनोट कस्तो छ ? हाम्रा गौतम वुद्धहरुको कुरा खोई, भूमिको कुरा खोई ? हाम्रो देशका विद्यार्थीले देशको कुरा जान्नु पर्दैन ? समुद्र र चन्द्रमाका कुरा त गरौंला तर हामीले हाम्रै भूमिलाई उपयुक्त हुने पाठ्यक्रम चाहिँदैन ? त्यसकारण पठनपाठन गर्ने विषयदेखि लिएर त्यसका पाठ्यक्रममा समेत परिवर्तन गर्न जरुरी छ । यतातिर पनि सरकारको ध्यान गएको छैन । जब पाठ्यक्रमका कुराहरु आउँछन्, केही निश्चित व्यक्तिहरु बसेर पाठ्यक्रम बनाइन्छ । शिक्षाका परिमार्जनका कुराहरु ल्याइन्छ तर राम्रो मान्छेभन्दा हाम्रो मान्छेलाई समेटिन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले के आशा गर्ने ?
- तपाईहरु नाम चाँही अभिभावकको लिने तर काम चैं अभिभावकको पक्षमा भन्दा सरकार र निजी क्षेत्रलाई नै सहयोग पुग्ने खालको गर्नु हुन्छ भन्ने आरोप छ नी...
बुझ्ने आम अभिभावक र जनता छन् भने त्यो हिसाबले हेरिँदैन । गलत कुरालाई गलत भन्न सक्ने स्थिति बनेन भन्दैमा पुराना चिज वा काम नलाग्न चिज सबैलाई राम्रो भनेर भन्न सकिँदैन । हामीले राखेका कुराहरु कोहीलाई चित्त नबुझ्न सक्छन् । यसले हामी तारो बनिरहेका छौं । सरकारी पक्षले पनि र नीजि विद्यालयले पनि अभिभावक संघलाई विरोधीको रुपमा हेरेको छ । दुबै पक्षकाले तपाइँहरु नभैदिएको भए त भनेर भन्नुहुन्छ । तपाँइहरुले नगरिदिएको भए त भन्नुहुन्छ उहाँहरु । उहाँहरुले जे जे भनेका कुरा छन्, ती सबै गर्दै जाने हो भने त आम अभिभावकहरुले आफ्ना सन्तानलाई स्कुलमा पठनपाठन गराउनै सक्तैनन्, त्यसैले आम अभिभावकको पनि विद्यालयमा पहुँच बढोस् भनेर हामी कराइरहेका हौं । हामी आम अभिभावकले भोगिरहेका पीडा, भोलिको राष्ट्रले खोजेको शिक्षाको लागि बोलिरहेका छौं । यो बोलीलाई सरकार पनि निजी विद्यालय पनि थुन्न चाहिरहेका छन् ।
- शिक्षाका यी छिद्रहरु चाहिँ कसरी टाल्न सकिएला त ?
नेपाल सरकारका जुन जुन निकायमा रहेका कर्मचारीहरु छन्, चाहे त्यो पियनदेखि मुख्य सचिवसम्म किन नहोस् र वडाअध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका व्यक्तिहरुले आफ्ना सन्तान सरकारी स्कुलमा पढाउन थाल्नुपर्छ । सरकारी स्कुलको स्तर उन्नतिको लागि । आफ्नो बच्चा जसलाई सरकारी स्तरमा बसेर निर्णय गर्ने व्यक्तिहरुका सन्तानहरु सरकारी स्कुलमा पढेका छन् त ? छैन । अनि सरकारी शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ ? त्यसो भयो भने आम जनताले सरकारी स्कुलप्रति विश्वास गर्छ, प्राइभेट स्कुलहरुको दुःखमा पर्नुपर्दैन ।
- तपाईहरु जब जब नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुन्छ त्यतिबेला मात्रै कराएको जस्तो गर्नु हुन्छ अरु बेला पनि सकृय हुनु पर्ने हैन र ?
धेरैले देख्दा त नयाँ शैक्षिक सत्रतिर, भर्नाको समयमा, पाठ्यक्रम नयाँ जाने समयमा हाम्रो सकृयता धेरै भएको देख्छन् । तर हामी वर्षभरी नै शिक्षाको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष काम गरिरहेका हुन्छौं । शिक्षा क्षेत्रका सबै निकायहरुलाई विविध समस्याबारेमा घच्घच्याइरहेका हुन्छौं । सुधार गर्नका लागि सुझाव दिइरहेका हुन्छौं ।
- अभिभावक संघलाई त प्रोपोगन्डा गर्ने निकायका रुपमा बुझ्छन् नि ?
प्रोपोगण्डा हो या वास्तविकता, भन्ने कुरा त आम जनता र अभिभावकले छुट्याउने कुरा हुन् नि । केही समूहले त्यस किसिमको आरोप लगाए पनि त्यो मारमा परेका अभिभावकले त हामीलाई स्याबासी दिएका छन् नि । हामीलाई आम अभिभावकसँग सरोकार छ, कुनै समूह, विद्यालय सञ्ञ्चालक, प्रअ, शिक्षा विभागका कर्मचारी, मन्त्रालयका कर्मचारीसँग सरोकार छैन । प्राइभेट स्कुलहरुलाई स्वीकृत दिँदा एउटा निश्चित मापदण्ड तोकेर स्वीकृति दिइएको छ, ती मापदण्ड फलो गरेन भने यी÷यी कुराहरुबाट कारबाही गर्छु भनेर भन्न सकेको छ र सरकारले ? आज नेपाल सरकारले त्यस्ता विद्यालयलाई कारबाही गरेर यतिवटा स्कुल बर्खास्त गरियो भन्ने कुरा सुन्छौं त ? सुन्दैनौं । शिक्षा मन्त्रालयले यो स्कुलले यो यो बद्मासी गरेकोले हामीले यो स्कुललाई खारेज गर्यौं, स्कुललाई कारबाहीमा पार्यौं, यो स्कुलमा विद्यार्थीलाई सार्ने व्यवस्था गर्यौं भनेर निर्णय गरेको छ ? हामी पाउँदैनौं ।
- लामो समय सम्म एकै ब्यक्तिको नेतृत्वमा रहेको संघमा तपाई नेतृत्वमा आउनु भएको छ, संघका अहिलेका एजेण्डाहरु के के बनाउनु भएको छ ?
हाम्रा एजेण्डाहरुमा अहिलेलाई कक्षा एकमै भर्नाका लागि परीक्षा लिने प्रणाली ठीक होइन् भन्ने कुरा उठाइरहेका छौं । प्राइभेट स्कुललाई एक प्रतिशत शिक्षा कर लगाइएको छ तर त्यो कर स्कुलले नभएर बच्चाले तिरिरहेका छन् । त्यो खेदजनक कुरा हो । विभिन्न नाममा शुल्क उठाउने नाजायज कुराहरु बन्द गर्नुस् भनेका छौं ।
प्रकाशित मिति २०७४ बैशाख ६ ,बुधबार
आर्थिक अख्तियारीसँगै शिक्षा मन्त्रालयद्धारा सरुवा, कसको सरुवा कहाँ
विद्यालयका शिक्षक प्रति प्रधानमन्त्रीको कडा अभिब्यक्ति, कक्षामा अनिवार्य पुग्नैपर्ने
अब परीक्षा फारम अनलाइनबाट
विश्वविद्यालयका काठमाडौं स्थित सम्पर्क कार्यालय खारेज
शिक्षाका केन्द्रीय निकाय २ वटा, ढाँचा तय गर्ने जिम्मा संघीय मन्त्रालयलाई
शुल्क वृद्धि फिर्ता भएन
जिल्ला शिक्षा प्रमुख घूससहित पक्राउ
बेमौसमी खेतीमा अनाजकाे भाऊ राम्रो पाइन्छ ।..
रुद्र प्रसाद दनै
ने. रा. शि. सं मा अहिलेसम्म कोहि राजनितिक मान्छे अध्यक्ष भएको रेकर्ड छैन । यसपटक पनि हुदैन । सामान्य राजनितिक बुझाई..
58 nai best..
Ramro article ..
शिक्षाको विकासमा सघाउने चीनको प्रतिवद्धता
काठमाडौं - चीनले नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र नेपालका लागि चिनिया राजदूत यू होङ् बिच मंगलबार भएको भेटवार्तामा उक्त प्रतिवद्धता आएको हो । राजदूत होङ्ले नेपाल सरकारको प्राथामिकताको क्षेत्रमा सहयोग.....